Kenya oo dib u furtay Masaajidda Mombassa - BBC Somali
Kenya oo dib u furtay Masaajidda Mombassa
Image caption Masaajiddani ayaa qaarkood waxaa horey uga dhacay rabshado ay dad ku dhinteen.
Dowladda Kenya ayaa dib u furtay afar masaajid oo horey booliska u xireen kaddib markii ay sheegeen in ay ka heleen masaajiddaasi hub iyo waxyaabaha qarxa.
Xiritaankooda ayaa xiisad ka abuuray magaalada Mombassa oo in muddo ah ay ku soo noqnoqdeen isku dhacyadda u dahxeeya dhalinyaro islaam ah iyo booliska.
Booliska ayaa waxa ay sheegeen in masaajidadan ay la wareegeen waxa ay ugu yeereen dhalinyaro xag jir ah.
Afarta masaajid ee dib loo furay ayaa mid ka mid ah salaadii duhur waxa ku tukaday hoggaamiyaasha siyaasada ee gobolkaasi xeebta.
Wadahadalo u dhaxeeyey siyaasiyiinta iyo dowladda ayaa waxa la isla gartay in masaajidadaas lagu wareejiyo guddi ay soo magacawday dowladda oo maamuli doona masaajidadaasi
Culimada Islaamka dalka kenya ayaa si xooggan u cambaareeyey masaajidada la xiray iyaga oo sidoo kalena ku tilmaamay in ay yihiin maclumaad aanan lagu kalsoonaan kareynin wararka ay boolisku sheegeen ee ah in hub laga helay masaajidada.
Magaalada Mombassa ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa ku soo noqnoqday isku dhacyadda u dhaxeeya booliska iyo dhalinyaro ka careysan waxa ay ku tilmaamayaan beegsashada dadka islaamka
Dhowr wadaad ayaa sidoo kale lagu toogtay magaalada. Hay’addaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale ku eedeeyey dowladda in awood xad dhaaf u adeegsanayaso la tacaalidda waxa ay ugu yeertay argigixisada.
Dibadbaxyo ka dhacay magaalada kaddib hawlgaladda ay booliska ku xireen masaajidda ayaa waxa loo qabtay boqolaal dhalinyaro ah, waxaana qaar ka mdi ah lagu wadaa in maxkamad la horgeeyo maalinta jimcada ah.